Nahoana no ampiasain'i Google ho fonosana fotsy? - Valiny mamaly
Google Docs na Google Sheets dia rindrambaiko web. Ireo fampiharana ireo dia mifanaraka amin'ny format Office X Office maro ary manampy amin'ny fanasarahana ny tranonkala samihafa. Azonao atao ny mampiasa ny Google Sheets mba hamoronana sy hanitsaka ireo rakitra ao amin'ny harato ary hahazoana data amin'ny fotoana mahamety azy. Ny Google Sheets sy ny Google Docs dia nahazo fiderana hatraiza hatraiza noho ny fahatsorany, famoahana vokatra matetika sy valiny azo antoka. Raha mikasa hanangana tranokala ianao ao amin'ny Google Sheets, mila manaraka dingana vitsivitsy ianao.
Ny dingana voalohany dia ny mandefa ny URL ao amin'ny takelaka.
Amin'ny dingana faharoa dia hivezivezy mankany amin'ny tranokala ianao, hitety ny famelabelaran-kevitry ny mpanoratra ary havanana click to bring up the menu.
Fahatelo, tsindrio ny safidin'ny Inspect Element. Io dia hampiseho varavarankely fanaraha-maso avy hatrany izay ahafahanao mamantatra ireo singa HTML.
Ny dingana manaraka dia ny mametraka fehezan-dalàna manokana ao amin'ny fikandran'ny entana. Azonao atao koa ny mampiasa ny fonosana import-XML amin'ny Google Sheets mba hahazoana ny asa vita.
Tombontsoa lehibe avy amin'ny Google Sheets:
1. Kitendry hitsin-dàlana
Misy fifandimbiasam-pahefana samihafa hanamora ny asanao. Amin'ny Google Sheets, azonao atao tsianjery mora foana ny fametavetana vitsivitsy ary manatanteraka asa maro samihafa avy hatrany. Ohatra, ny Ctrl + C dia ampiasaina mba handikana lahatsoratra avy amin'ny tranonkala samihafa, ary ny Ctrl + V dia ampiasaina hampidirana ity lahatsoratra ity anaty taratasy tsotra.
2. Fomba sy fanadihadiana
Azonao atao ny mamorona mora kokoa amin'ny aterineto sy ny fanadihadiana miaraka amin'ny Google Sheets. Tena ilaina ho an'ny webmasters sy ny freelancers izay te-hahazo valiny avy amin'ny mpanjifany.
3. Araraoty ary tehirizo ny votoatin'ny tranonkala
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny Google Sheets dia ny fahafantaranao mora foana ny votoatin'ny tranonkala. Azo ampiasaina ho an'ny orinasa sy mpandrindra ny programa ary manampy azy ireo hamonjy ny votoaty ao anaty format malalaka sy azo henoina. Azonao atao ny maka ny raki-daza mivantana amin'ny sarimihetsika sarotra ho an'ny fampiasana offline.
Google Sheets dia mifanaraka amin'ny rafitra rehetra sy ny ordinatera ary ny fitaovana finday. Azonao atao ny mampifandray azy ireo amin'ny kaonty Gmail sy maka download ary mamonjy tahiry marobe araka izay tianao. Ny Google Sheets dia tonga lafatra amin'ny mpizara dizitaly ary manampy azy ireo hanatontosa asa maromaro.
5. Chat rehefa manitsy
Ny fahafahana miara-miasa amin'ny namana dia tombontsoa voalohany amin'ny Google Sheets. Afaka mifampiresaka amin'ny namanao ianao rehefa mijery ny tahirin-tranonkalanao na manaparitaka votoaty ao anaty aterineto. Afaka mifandray amin'ny mpanjifanao ihany koa ianao ary asehoy. Noho izany dia tokony kitihina amin'ny zana-tsipika amin'ny sehatra Chat ianao ary mankafy fifanakalozan-kevitra amin'ny fotoana mety.
Misy gadget maro ao amin'ny Google Visualization API Gadget Gallery. Afaka mandefa fitaovana maro araka izay azo atao ianao ary manatanteraka ny asanao. Mpanjifa banky ve ianao? Ny Google Finance dia hanampy amin'ny fanatontosana asa samihafa amin'ny harato. Azonao atao ny mamantatra mora foana ny fampiasam-bola ankehitriny ary averina jerena ny antontan-kevitra ara-tantara. Miaraka amin'ny Spreadsheets Google, afaka jerena sy misokatra ny rakitra misy anao. xls, doc,. odt,. xlsx, ppt, ary ny hafa Source .